Cabsida cakiran ee noocyada kala duwan ee WordPress Website Hacks
Haddii sawiradaada ammaanku ay soo noqoto mid wanaagsan, website-kaaga ayaa laga yaabaa in lagu garaaco spamka. Dhamaanteen waan ognahay in WordPress uu yahay nidaamka ugu caansan uguna wanaagsan ee maareynta maareynta. Sababtoo ah tirada iyo mugga shabakadaha WordPress ee internetka, waa ku dhowaad aan suura gal ahayn in aan ka badbaado ka hack hacks - peru vacations spots.
Ryan Johnson, khabiir sare oo ka socda Semt , ayaa halkan ku siinaya guud ahaan noocyada kala duwan ee shabakadaha WordPress ee khadka internetka kuugu xiran si aad u sugto nabadgelyo.
Xannaaneyntu waxay daboolaysaa dhammaan noocyada khataraha iyo barnaamijyada khatarta ah iyo software-yada, sida fayrasyada, Trojans, ransomware, iyo spyware. Waxaad arki doontaa xisaabta Google Analytics; Xayeysiinta sidoo kale pop-ups ee daalacashada webka digniin ah in ay u leeyihiin sidii loo dhigay sida ugu dhakhsaha badan. Waa inaad gashaa barnaamijka antivirus ama barnaamijka ladagaallanka lidka ku ah si looga saaro. Nidaamku wuxuu sameyn karaa dhammaan noocyada waxyaabo naadir ah sida xadida macluumaadka kaararka deynta, macluumaadka shakhsiyeed, waxyeeleynta goobtaada, tirtiridda faylasha muhiimka ah iyo xirashada kombuyuutarkaaga ama qalabka mobile-ka ilaa aad ka bixiso madax furasho
Weerarrada phishing ayaa inta badan ku dhacaan adigoo ku soo diraya emails kugu dhiirigelinaya inaad xirto qaar ka mid ah lifaaqyada ama geli bogag dhowr ah sida PayPal, bangiga Mareykanka, iyo kuwa kale. Waxay rabaan inaad ku riixdo xiriirka shakiga leh oo fiiri dhab ah. Guud ahaan, weerarrada phishing ayaa loola jeedaa inay ku foolleeyaan, oo khawano-yari waxay u isticmaalaan email-yadaas si ay u xaddidaan caddayntaada internet-ka. Waa inaadan waligaa ku dhajin email kasta oo u ekaa shaki ama shaki.
SQL waa luuqad kombuyuutar ah oo ay isticmaalaan blogs'kaada WordPress iyo boggaga internetka. SQL (Luuqadda Soodhexe leh) waxay gacan ka geysataa la xiriirka macluumaadka. Dhiirogelinta, cirbadaha SQL waxay beddeli karaan weydiimaha sirta ah ee ku jira codsiyada keenaya xogta si ay u sameeyaan wax la mid ah jooji iyo phishing. Koxootiyayaashu waxay u isticmaalaan macluumaadkan si ay u xadaan xogtaada oo ay waraaqahaaga u wareejiyaan hal kombuyuutar kale. Plugins Wordpress iyo mawduucyo kala duwan ayaa kaa caawin kara ka hortagga cirbadaha SQL.
Emailka kala duwan ee internetka, dadku waxay isticmaalaan isku mid ah ereyga oo ku yaal goobo kala duwan. Haddii hackers ay ogaadaan mid ka mid ah furahaaga sirta ah, waxay awoodi karaan inay si fudud u galaan xisaabahaada badan. Taasna waa sababta aad u joojin lahayd furahaaga sirta ah in la xakameynayo oo lagu heysto furayaasha kala duwan ee xisaabaadka kala duwan.
Qalabka casriga ah ee maqan
Khabiirada WordPress waxay ku dadaalayaan sidii loo hagaajin lahaa plugins, software, iyo mawduucyada. Isticmaalayaasha Wordpress ma aha mid taxadar leh oo ku saabsan rakibidda iyo cusbooneysiinta barnaamijyadooda. Sidaas daraadeed, maqnaanshaha casriyeynta software waxay kuu horseedi kartaa inaad ku dhibto internetka. Waa amaan inaad sheegto in tani ay noqotey mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee internetka aadna laga yaabo inaad lumiso faylasha iyo xogta qiimaha leh oo ay ugu wacan tahay casriyeynta software-ka.
Mawduucyada amniga iyo khidadaha
Sida dadka kala duwan waxay ku-biiriyaan codadka WordPress ee qaababka mawduucyada iyo ku-soo-gelinta, hackers-ku waxay ku faafin karaan nacas iyo fayras si fudud. Ilaalinta ugu habboon waa in la keydiyo iyo mawduucyada la cusbooneysiiyo.
Siyaasadaha nabadgelyada liita ayaa kaa dhigi kara murugo, ganacsiguna wuxuu joojin karaa koritaanka. Haddii dad badani ay galaan boggaaga, uma baahnid inaad sameyso maamulaha. Bedelkeed, waxaad ku meelayn kartaa doorar kala duwan oo ka hortagaya inay galaangal ku yeeshaan guddiga maamulka ee boggaaga WordPress.
Weerarrada Adeegga Diidmada Adeegyada waa mid baahsan oo si sahlan loo bilaabi karo internetka. Waxay si sahal ah u keeni karaan daraasado daraasad ah iyadoon aqoon u lahayn maamulayaasha websaydhka.